इतिहासमै पहिलोपटक चन्द्र र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झण्डा फहराउदैँ नेपाल एयरलाइन्स २५७ जना यात्रु लिएर अष्ट्रेलिया उड्यो ! – Namaste Dainik
April 1, 2020 NamastedainikLeaveaComment on इतिहासमै पहिलोपटक चन्द्र र सूर्य अङ्कित राष्ट्रिय झण्डा फहराउदैँ नेपाल एयरलाइन्स २५७ जना यात्रु लिएर अष्ट्रेलिया उड्यो !
दैँ नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को वाइड बडी जहाज अष्टे«लिया उडेको छ । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल एयरलाइन्सको वाइड बडी एयरबस ३३० जहाज केहीबेरअघि अर्थात् साँझ ६ः१२ मिनेटमा त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलबाट गन्तब्यतिर उडेको हो ।
निगमले मलेसियाको क्वालालम्पुर हुँदै अष्ट्रेलियाको शहर ब्रिश्वेन पुग्ने गरी आज साँझ ५ः३० बजे उडान तालिका बनाएको थियो । निगमको उड्डयन इतिहास मै पहिलो पटक वाइड बडी जहाजले लामो गन्तब्यको उडान भर्न लागेको हो । मलेसिया ट्रान्जिट हुँदै अष्ट्रेलियासम्मको यो उडान करिब १३ घण्टाको हुनेछ । यो जहाजमा अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डका २५७ जना यात्रु रहेका छन् । जहाजमा ६ जना चालकसहित कुल २४ जनाको सञ्चालन टोली समेत उडेको छ ।
अस्ट्रेलियामा पहिलोपटक नेपाली जहाज ओर्लन लागेको हो । अस्ट्रेलियाबाट भने जहाज रित्तै आउँदैछ । अस्ट्रेलियाली सरकारले यो उडानको व्यवस्थापन मिलाएको हो ।